HomeChampions LeagueBarca Iyo Taariikhda Madow ee Garsooraha Dhex dhexaadinaya Ciyaarta Man City Ee Berri
Garoosraha Jarmalka ah ee Felix Brych ayaa loo qorsheeyey inuu siidhiga qabto ciyaarta is araga hore Champions Leugue ee Barcelona iyo Manchester City Dhex mari doonta.
Siidhiwadahan ama garsoorahan magacaabistiisa ayaa waxa si weyn uga qaylisay kooxda Barcelona oo sida taariikhda lagu hayo, aan waligeed ku guulaysan ciyaaro uu dhex-dhexaadinayo sidoo kalena aan wareeg u gudbin wareeg uu ciyaar kamid ah garsoore Brych siidhiga qabtay, sidaas darteed , waxaynu halkan si kooban ugu guud mari doonaa ciyaarihii garsoorahani soo qabtay ee Barca iyo koox kale dhex martay isla markaana ay ku guuldaraysanaysay mar kasta.
Felix Brych, wuxuu ahaa garsoorihii dhex dhexaadinayay ciyaartii is araga koobaad ee horyaalka Champions League sanadkii hore ee dhex martay Barça iyo Atlético kuna dhamaatay barbar dhaca (1-1)ka ah, waxaanay ahayd kooxda caasimada ka dhisan midii u gudubtay Semi Finalka kadib markii ay ciyaartii dambena gacan saraysay.
Sanadii 2012, Wuxuu dhex-dhexaadinayay kulankii is araga koobaad ee horyaalka naadiyada Yurub ee ku dhex maray Chelsea iyo Barcelona geggida Stamford Bridge. Kooxda Ingiriiska ah ayay guushu ku raacday 1-0 ciyaartaas tii ka dambeysayna ee is araga labaadna noqotay mid u gudubtay Finalka ugu dambeyntiina qaadayba koobkii Champions League ee sanadkaas.
Wuxuu sidoo kale hayay kulankii Barca bar-bar dhaca 1-1 ka ah ay ku kala baxeen AC Milan wareegii guruubyada xili ciyaareedkii 2012/13, halka uu sidoo kale dhex dhexaadiye ka ahaa labadii ciyaarood ee saaxiibtinimo ee ay la kala ciyaartay Inter Milan iyo Bayern Munich, kuwaas oo mid kamid ahna laga badiyey midna barbar dhac ku dhamaatay.
Ma Dhabbaa In Coutinho U Wareegayo Barcelona